“Qarashka nagu baxa bil walba waa 30 milyan oo dollar, dalkana waxaa uu soo saari karaa oo keliya 14 milyan” – Kalfadhi
“Qarashka nagu baxa bil walba waa 30 milyan oo dollar, dalkana waxaa uu soo saari karaa oo keliya 14 milyan”
August 4, 2020 August 4, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal, ayaa shalay shir-guddoomiyay kulanka 21-aad ee Kalfadhiga 7-aad ee Golaha Shacabka BJFS, kaas oo ka dhacay xarunta ku-meel-gaarka ee Villa Hargeisa.
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay dib-u-eegista iyo ku-noqashada Miisaaniyadda sannadka 2020.
Siihayaha wasiirka wasaaradda maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa mahadcelin kaddib, sheegay in miisaaniyadda dalka Soomaaliya loo qeybiyo laba nooc oo kale aha miisaaniyad loogu talagalay mashaariicda iyo qeyb nolol maalmeedka lagu isticmaalo oo mushaaraadka iyo howlgallada ay kamid yihiin.
Qarashka nagu baxa ee aan u baahanahay bil walba waa 30 milyan oo dollar, dalka waxaa uu soo saari karaa oo keliya 14 milyan. 16-ka milyan ee dhimman waa in meel kale laga keennaa, haddana bil walba ma keenni karno, laakiin dadaalkeena waa in aan bixinaaa lacagahaasi, maxaa yeelay dhibaato ayaa imaaneysa haddii mushaarka iyo raashiinka la bixin waayo, ayuu yiri.
Dhinaca kale mar uu ka hadlayay la dagaallanka ayaxa waxaa uu yiri “Ayaxa hadba meesha uu joogo ayaa la tagayaa, waxaana nagala shaqeynaya hay’ad. Deeggaan aan ayax joogin lacag ima weydiin karo. Haddii ayax uu kula joogin lacagtaasi waxba kuma lihid”.
“Haddii deeggaanka uu yiraahdo lacag ayaan u baahanyahay, ayax haddii uusan kula joogin iska dhaaf lacagtaasi oo hasoo dalbanin”.